Maxaa xiga kadib joojinta macdan qodista Pajala - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxaa xiga kadib joojinta macdan qodista Pajala
Dhallin-yaradii ayaa ku nagaatay.
La daabacay torsdag 13 november 2014 kl 14.33
Muddo iminka shan toddobaad laga joogo ayaa ka soo wareegtay klolkii shirkadda Northland Resources ay farriinka u qabatay howlihii qodista macdanta ee nawaaxiga degmada Pajala. Qiyaastii 500 oo ruux ayaa ka howl-gala shirkadda iyo dhammaan shirkadaha ka sii hoos shaqaqeeya. Wixii ka horeeyay intii aan nawaaxigaa laga bilaabin howlaha macdan-qodista ayay caqabad ka jirtay nawaaxigaa iyo bulshada oo ku sii yaraaneeysa, halka iminka ay degmada ka aloosan tahay aqoonin la'aan la xiriirta mustaqbalka.
Åsa Allan, madaxa laanta qorsheeynta ee shirkadda Northland Resources, oo ka mid ah howl-wadeennada tirada yar ee weli ka howl-gala carrigaa iyo sidii loo soo gabagabeeyn lahaa howlaha:
- Laba tioddobaad ayey qaadatay in mashiinnada oo dhan la dhaqaajin karo si loo baarkingareeyo. Howl-waddeennada ku mashquulsanaa hoowlahaasina aaney ula muuqan shaqo wanaag-san in lagu mashquulo xiritaanka goob shaqo.
Åsa Allan ayaa ku howlan dar-yeelka goobta macadan qodista ee Kaunisvaara oo dhacda bannaanka degmada Pajala. Howlaha goobtaa ka socdey ayaa la joojiyey toddobadii bishii oktoobar, iyada oo wixii intaa ka dambeeyayna ay magaaladu ku jirtay istaambeey, sida ay sheegtay Kerstin Svala, kana howl-gasha shirkadda dalxiiska ee Pajala.
- Waxaa la dareemeyaa iney ka deggen tahay, waa sidiiyoo wax la dhoowrayo. Wax walba si un bay u istaageen. Waxaana lagu jiraa xaalad wax la sugeyo, la sugeyo oo la sugeyo. Aan bal aragno waxa ka soo naasa caddaada xilliga gu'ga.
Macdan qodista Pajala waxaa la daah-furey bishii diseembar ee sannadkii 2012. Iyada oo dhaqaalaha lagu miisaaniyad geliyey uu kor u gaareeyso 10 milyaard oo koronka iswiidhishka, halka ay degmada Pajala dhistey deegaanno cusub oo degmadu leedahay oo gaarsii-san 160, kuwaasina oo ey sabab u ahaayeen howlaha macdan-qodista ee halkaa laga bilaabey. Kurt Wennberg kana mid ah hoggaanka degmada ee xisbiga Socialdemokraterna oo iminka howlsha lagala wareegeyo:
- Sannooyin aad u badan ayaan dhibaato ku qabney hoos u dhaca bulshada degmada ku dhaqan. Iyada oo bilowgii howshani ahayd mid rajo wanaag-san dhalisay, waxna ka badashay mustaqbalkii degmada. Waagii hore dadku wey ka guuri jireen halka, halka iminka ey waayadii dambe loo soo guuri jirey. Waxaa degmada ku nagaadey dhallinyaradii degmada, halkii ey horey uga safri jireen.
Hase yeeshee ey caqabadaha dhaqaale ey goor hore biloowdeen, middaasina ugu wacneeyd hoos u dhaca qiimaha macdanta birtu, oo kolkii howshaa la joojiyey aaney socon xitaa muddo laba sannadood ah.
Rolf Digervall wuxuu xilligaa ka mid ahaa howl-wadeennada shirkadaha ugu waaweyn ee la shaqeeya shirkadda macdan-qodista ee Northland Resources, halka uu shaqa-joojinta ka maqlay un idaacadda la iska dhageeysto.
- Waxaan ku fekery, OK. Taana halkaa ayay ku dhammaatay. Waa in laga sii socdaa. Waxay ahayd war-bixin argagax lahayd, argagax ka ballaaran shakhsi aad si wanaagsan isu taqaanaan oo xannunsaday… wax la sugayey ayay ahayd, laakiin mar walba waa mid argagax leh.
- Dhanka kale wax walba qiime ayay ku fadhiyaan iyo sidoo kale qodista macdanta birta … Waa nabar cimilada ku dhacaya, midkaasina oo qaadanaya muddo dheer sidii ay uga bogsoon lahayd. Waxaana loo baahan yahay in loo fekero hab ka duwan hababkii hore. Maahan in shirkadda un laga dhowro inay wax walba qabato. Waxaa loo baahan yahay in si bulshadu halka ugu nagaato ey jiraan waxyaabo kale oo fara badan oo la qaban karo oo aan la isku qafilin walax keliya. Laakiin waa mid u caadi ah magaalooyinka yaryar. In kolka ay ka howl-gasho shirkad wayn iyada un la tala saarto, sida uu sheegay Rolf Digervall oo ku dhaqan degmada Pajala.